Lubuyela enkantolo olukaCaster Semenya ne-IAAF - Bayede News
Abameli bomsubathi uCaster Semenya sebefake amaphepha enkantolo i-European Court of Human Rights balwa nokumiswa kwakhe ekungeneleni imincintiswano yokugijima nabesifazane. Izinkinga zalo msubathi kade zaqala.
Lulunye kuNhlaba ngowezi-2019, yachitha isicelo sakhe sokuhoxiswa kwemigomo yenhlangano yabasubatho jikelele i-International Association of Athletics Federations (IAAF) esasikala ukuthi ongenela imincintiswano yokugijima yabesifazane kumele abe nezilawulimzimba (amahomoni) eziluhlobo luni. Ngokwale migomo, uma kukhona ongowesifazane ngokobulili kodwa izilawulimzimba zakhe zikhomba ukuba ngezowesilisa kumele kube khona imishanguzo ethize ayidlayo ukuze izilawulimzimba zakhe zifane nalezo zabesifazane. Lo mgomo wamukhipha inyumbazane uSemenya yena nakuba ngokobulili engowesifazane kodwa izilawulimzimba zakhe zisondele kulezo zabesilisa.
Lo mgomo we-IAAF wawusho ukuthi uSemenya angeke asakwazi ukungenela imincintiswano ngaphandle kokudla imishanguzo yokulawula izilawulimzimba. Lo mgomo wawuphonsela inselelo enkantolo yezemidlalo iCourt of Arbitration for Sport (CAS) nokho okubanga impumelelo.
Ukwenqaba ukuthobela lo mgomo lo msubathi wabe esenqatshelwa ukungenela umncintiswano iDiamond League eyayisedolobheni laseQatar iDoha ngoMandulo wanyakenye. Lokhu kwamuphuca isicoco sakhe sebanga elingama-800 ngaphandle kokunikwa ithuba lokusivikela.
Nakulo nyaka lo msubathi unenkinga efanayo njengoba kuzoba nomncintiswano omkhulu owenzeka njalo emuva kweminyaka emihlanu i-Olympics ozoba sedolobheni laseJapan iTokyo zingama-23 kuNtulikazi. Ukungayi kwakhe kuyobe kuchaza ukuthi akazosivikela isicoco sakhe sangowezi-2016 asinqoba emncintiswaneni owawusedolobheni laseBrazil iRio de Janeiro.
Lo msubathi ufaka amaphepha nje ngoLwesithathu ikomidi lezemidlalo eHhovisi likaNgqongqoshe uNathi Mthethwa ngokubambisana neSouth African Sports Confederation and Olympics Committee (SASCOC) ne-Athletics South Africa (ASA) lithe lizomeseka ekufakeni isicelo sokubuyekezwa esinqumeni seSwiss Federal Supreme Court sangoMandulo wanyakenye esasivuna iCAS ngemigomo ye-IAAF. Lo mgomo wawuphinde uthi uma lo msubathi efisa ukungenela le mincintiswano ngaphandle kwemigomo yokulawula izilawulimzimba angangenela leyo engaphezu kwamabanga ayi-1500. Okuyinto ephambanayo nalo msubathi ngoba yena ugijima imincintiswano yamabanga angama-800 nengama-400.
Ekhasini lakhe lakuTwitter uthe le mpi ayikho ngaye kuphela kodwa ingabo bonke abesifazane abakwezemidlalo. Selokhu kwaqala lo mdonsiswano baningi abanomuzwa wokuthi lo mgomo usuqhanyukiswa ngoba owoHlanga kunguye obaqwaqwada emakhanda kanti ukube mhlophe ngabe akalwiswa kangaka. Uma inkantolo izolamukela njengoluphuthumayo lolu daba kuzocaca ukuthi ngabe umsubathi uyaya yini eTokyo.